Kabary fisaorana tamin’ny nanomezana ny zatovovavy - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary fisaorana tamin’ny nanomezana ny zatovovavy
Kabary fisaorana tamin’ny nanomezana ny zatovovavy
by Alpha world on 23 h 19 in Culture, Education
Mpangataka: Tompokolahy sy tompokovavy!
Zina e ny vaninandro korana, fa meva fibaliaka ny masoandro. Feno haravoana izao rehetra izao fa tafahaona, ny tamboho mitady sy ny tamboho tadiavana.
Misaotra sy mankasitra anareo izahay fa raha tonga teto nandom-baravarana dia novohanareo, raha tapatak’ahitra sy nitoritory ravina izahay dia tsy nisy mafy nalain’ny nify teto fa ny malemy niraisin'ny molotra, tsy nataonareo fola-tanana manondro na fotsy rora niteny.
Nitady toko izahay ka sendra vato, nitady mamy ka sendra tantely, nitady tiana ka tojo Malala. Nifanojo ny tia sy manina, koa faly ny fonay mianakavy, fa ny atody nakotrika foy avokoa, ny saonjo nambolena tsy namarara, ny anton-dia nahafinaritra
Kabary fanolorana ny Solom-Bodiondry
Kabary fisaorana tamin’ny fanomezana Solom-bodiondry
Kabary fangatahana ny hidiran’ny Zatovovavy
Kabary mandritra ny fidiranan’ny Zatovovavy
By Alpha world at 23 h 19